आलम प्रकरण नयाँ खुलासा, अमनाले गराएकी थिइन् ओसीको मृत्युदर्ता
२०६४ साल चैत्र २७ गते राजपुर फरहदवामा बम विष्फोटमा परेर घाइते भएका त्रिलोक प्रताप सिंह अर्थात् ‘पिन्टु’, ओसी अख्तर लगायत दर्जनबढी मानिसलाई इँटाभट्टामा जिउँदै जलाएको आरोपमा पक्राउ परेकाविरुद्ध जिल्ला अदालत रौतहटमा थुनछेक बहस चलिरहँदा मृतक ओसी अख्तरकै श्रीमती फरक निवेदन लिएर जिल्ला अदालत पुगिन् ।
घटनाको योजनाकार र मुख्य अभियुक्त मनिएका निलम्बित सांसद मोहम्मद अफ्ताव आलमविरुद्ध जिल्ला अदालत रौतहटमा थुनछेक बहस चलिरहँदा मृतक मानिएका ओसी अख्तरकै श्रीमती अमना खातुनले भने आफ्नै परिवारको रिटविरुद्ध हुने गरी आफना श्रीमान्को मृत्यु नभएको जिकिर गरिन् ।
वादीको तर्फबाट सरकारी वकिल कार्यालयका जिल्ला न्यायाधिवक्ताहरुले बहस गरिरहेकै बखत मृतक मानिएका ओसी अख्तरकी श्रीमती अमना खातुन निवेदन लिएर जिल्ला अदालतमा पुगिन् । आफूसँग एउटा निवेदन रहेको भन्दै उनले अदालतमा पेश गर्न चाहिन् । निवेदनमा के छ भनेर जिल्ला न्यायाधीश दीपक ढकालले सोध्दा उनले सरकार पक्षले मृतक दावी गरेको आफ्ना श्रीमान् वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा विदेशमा रहेको बताइन् । तर जिल्ला न्यायाधीश ढकालले कानुन विपरीत रहेको भन्दै उक्त निवेदन दर्ता गर्नै मानेनन् ।
अमनाको निवेदन उनकै परिवारका सदस्यहरु दिवंगत सासु रुक्साना खातुन तथा मृतकका भाइ जमिल अख्तरकै जिकिरको ठीक उल्टो थियो ।
छोराको मृत्युको विषयलाई लिएर न्याय खोज्दै भौतारिने क्रममा ओसी अख्तरको आमा रुक्साना खातुनको समेत हत्या भएको थियो । यता मृतक ओसीको बुवाले पनि प्रहरीसमक्ष हत्यामा आलमकै संलग्नता रहेको किटानी गर्दै कागजमा सही गरेका थिए । रुक्सानाको हत्या भएपछि अर्कै श्रीमती विवाह गरेर हाल खाडी मुलुकमा रहेका ओसीका बुवाले प्रहरीसमक्ष दिएको बयानमा पनि हत्यामा आलमकै प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको जिकिर गरेका थिए ।
तर जब अफ्ताव आलम पक्राउ परे र अदालतमा मुद्दा चल्न सुरु गर्यो, तब थुनछेक बहस चलिरहँदा मृतककै श्रीमती अमना खातुनलाई प्रतिवादी पक्षले ‘किनेको’ र ओसी अख्तर वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा बाहिर रहेको बयान दिन थालेको आशंका छ ।
किन होस्टाइल भइन् अमना ?
जिल्ला अदालतमा अभियुक्तविरुद्ध मुद्दा चलिरहँदा अमना खातुन भने एकाएक परिवर्तन हुँदा आलम मुद्दामा एउटा नयाँ मोड खडा गरिदिने स्थिति पैदा भयो । अभियुक्त पक्राउ परेको झण्डै ३५ दिन दोषीलाई कारवाहीको माग गर्ने अमना एकाएक कसरी परिवर्तन भइन् त ? स्रोतका अनुसार मृतक ओसी अख्तरकी श्रीमती अमना खातुनलाई आलम पक्षले १० कठ्ठा खेत दिने बचन दिएका छन् । अहिले उनीहरु बसिरहेको स्थानमा १० कठ्ठा खेतको मूल्य करिब २० देखि २५ लाख पर्छ । त्यसकारण पनि मृतककी श्रीमती अमना खेतको मूल्यमा मुद्दामा सौदाबाजी गर्न खोजेको स्रोतको दाबी छ ।
आफैले हस्ताक्षर गरेर मृत्युदर्ता गराएकी थिइन् अमनाले
अहिले आफ्नो श्रीमान् वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा विदेशमा रहेको जिकिर गर्दै निवेदन बोकेर जिल्ला अदालत रौतहट पुगेकी अमना खातुन आफैले निवेदन दिएर श्रीमान्को मृत्यु भएको मृत्युदर्ता गराएकी थिइन् ।
२०७४ पुष १६ गते जारी भएको मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्रमा ओसी अख्तरको मृत्यु २०६४ साल चैत २७ गते राजपुर फरहदवामा भएको उल्लेख गरिएको छ । र, उक्त मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र पाउनका लागि अमना आफैले हस्ताक्षर गरेर हालको यमुनामाई गाउँपालिका वडा नम्बर ४ मा निवेदन दर्ता गराएकी थिइन् ।
हेर्नुहोस् ओसी अख्तरको मृत्यु दर्ताको प्रमाणपत्र ।
फोटो : मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र
यद्यपि आफैले निवेदन दिएर मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र लिएकी ओसी अख्तरकी श्रीमती अमना खातुन आफैले अहिले श्रीमान वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा विदेशमा रहेको उल्लेख गरेकी छिन् । यसबाट आलम मुद्दालाई कमजोर पार्न अमनालाई राम्रैसँग ‘किनिएको’ देखिन्छ ।
आफ्नै देवरसँग विवाह गरेकी थिइन् अमनाले
आफ्नो श्रीमान्को मृत्यु भएपछि अमनाले आफ्नै देवर अर्थात् मृतक ओसी अख्तरका भाइ जमिल अख्तरसँग विवाह गरेकी थिइन् । मुस्लिम समुदायमा दाजुको मृत्यु भएमा भाउजूसँग विवाह गर्न मिल्ने सामाजिक व्यवस्थाअनुरुप जमिल र अमनाले विवाह गरेका थिए । उनीहरुको तर्फबाट अहिले एक सन्तानसमेत रहेको छ ।
मृतकका भाइ तथा अमनाका हालका श्रीमान् भन्छन्, ‘हत्या आलमले नै गराएका हुन्’
अहिले अमना खातुनले आफ्नो पहिलोको बयान र कागज प्रतिकुल हुने गरी निवेदन बोकेर जिल्ला अदालत पुगेपनि अमनाका हालका श्रीमान् अर्थात् मृतकका भाइ जमिल अख्तरले भने दाजुको हत्या आलमको निर्देशनमा उनकै मान्छेहरुले गराएको दावी गरिरहेका छन् । चुनावी नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्न आलमले बम बनाउनका लागि मान्छेहरु ल्याएको र त्यही क्रममा बम विस्फोट भई घाइते भएका दाजुलाई आलमकै निर्देशनमा इँटाभट्टामा हाली जिउँदै जलाएको बताउँदै आएका छन् ।
यता, अमनाका बुवा तथा मृतक ओसी अख्तरका ससुरा पनि छोरीको पछिल्लो निवेदनप्रति रुष्ट छन् । आफ्नो ज्वाईँ ओसी अख्तरको हत्या आलमको आदेशमा उनका मान्छेहरुले गराएको भन्दै समसुल मियाँले प्रहरी र सरकारी वकिलसमक्ष बयान दिएका छन् । ‘बिष्फोटन पछि आफू इँटाभट्टा छेउको गहुँबालीमा लुकी बसेको समय आलमको आदेशमा उनका भाइ लगायतका मानिसहरु आई आफ्नो आँखा अगाडि नै घाइतेहरुलाई बोरामा ल्याएर जिउँदै जलाएर मारेको’ उनले बताउँदै आएका छन् । प्रहरीसमक्षको बयानमा पनि समसुल मियाँले त्यही कुरा बताएका छन् । तर छोरीको बयान फेरिनुको कारणचाहिँ उनले अझै बुझेका छैनन् ।
स्रोतका अनुसार निलम्वित सांसद अफताब आलम पक्राउपछि उनी निकटका मानिसहरुले मृतकद्वय त्रिलोकप्रताप सिंह र ओसी अख्तरको परिवारलाई विभिन्न प्रलोभन दिँदै आएको बुझिन्छ । प्राप्त जानकारी अनुसार पछिलो समय मृतक त्रिलोकप्रताप अर्थात् पिन्टु सिंहका बुवा श्रीनारायण सिंहलाई १० लाख रुपैया तथा मृतक ओसी अख्तरको श्रीमतीलाई १० कठ्ठा खेत दिने गरी कुराकानी भएको थियो । यद्यपि श्रीनारायण सिंहले आलमपक्षको प्रस्ताव अस्वीकार गरेको बताइएको छ ।
मृतक अख्तरकी आमा रुक्साना खातुन र मृतक पिन्टुका बुवा श्रीनारायण सिंहको जाहेरीको आधारमा गत असोज २६ गते प्रहरीले नेपाली काँग्रेसका निलम्बित सांसद आफ्ताब आलमलाई पक्राउ गरी कारवाही अगाडि बढाएको थियो ।
प्रहरीले करिब एक महिना अनुसन्धान गरी सरकारी वकिलमार्फत् जिल्ला अदालत रौतहटमा मोहम्मद अफ्ताव आलम र अन्य १० जनाविरुद्ध कर्तव्य ज्यानको अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
गत शुक्रबारसम्म पीडितका पक्षबाट जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका न्यायाधिवक्ता खडिन्द्रराज कटुवाल, सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता रामप्रसाद पन्थी, सह न्यायाधिवक्ता सूर्यराज दाहाल, उपन्यायाधिवक्ता अर्जुन कोइराला र उपन्यायाधिवक्ता रुद्रप्रसाद पन्थीले बहस गरेका थिए । त्यसैगरी वादीको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरु डाक्टर युवराज संग्रौला, डाक्टर कुमार शर्मा, दिनेश त्रिपाठी, जिल्ला न्यायाधिवक्ताहरु रुद्रप्रसाद पन्थी, मनिष कुमार श्रेष्ठ, गोबिन्द बन्दी, ओमप्रकाश अर्याल, पुष्पराज पौडेल, आशिकराम कार्कीले आलमलाई थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने प्रमाणसहित मागदावी गरेर बहस गरिसकेका छन् ।
पीडितपक्षका अधिवक्ताहरुले आलमविरुद्ध प्रमाणको रुपमा पीडितको किटानी जाहेरी, घटनास्थलबाट प्राप्त मृतक ओसी अख्तरको जुत्ता, मोजा, बम बिष्फोटनमा परेर घाइते भएका सेराजुल मियाँको बयान तथा सोही समय भारतमा उपचार गराएको कागजात प्रमाणहरु पेश गरेको जिल्ला न्यायाधिवक्ता खडिण्द्रराज कटुवालले बताएका छन् ।
त्यसैगरी घटनालगतै मौकामा परेको पीडितद्वारा निवेदन, बम बिष्फोटनपछि चुनाव रोक्न प्रत्यासीले सोही समय प्रहरीलाई दिएको निवेदन, घटनास्थल राजपुर फरहदवाका छिमेकीको बयान, इँटाभट्टाका मजदुरको बयान, नेपाल प्रहरीका तत्कालीन प्रहरी प्रमुख ओमविक्रम राणा र ईलाका प्रहरी कार्यालय राजपुरका तत्कालीन प्रमुख प्रहरी निरीक्षक इन्द्र सुवेदीद्वारा बम बिष्फोटन भएको स्वीकारोक्ति बयानको आधारलाई प्रमाणको रुपमा पेस गरिएको छ ।
अभियुक्त आलमलाई बाहिर राखेर अनुुसन्धान गर्दा अनुसन्धाननै प्रभावित हुने भएकाले आरोपी आलमलाई थुनामै राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने भन्दै वादीतर्फका वकिलहरुले बहस गरेको जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय रौतहटका जिल्ला न्यायाधिवक्ता खडिन्द्रराज कटुवालले रातोपाटीलाई बताए ।
प्रदेश नम्बर २ मा आइतबार सार्वजनिक विदा भएकाले प्रतिवादीका तर्फबाट भने सोमबारदेखि मात्रै बहस सुरु भएको छ । प्रतिवादी अर्थात् अफताव आलमको तर्फबाट बहस गर्नका लागि वरिष्ठ अधिवक्ताहरु शम्भु थापा, रमण श्रेष्ठ, शेरबहादुर केसी लगायतको टोली यतिबेला रौतहटमै रहेका छन् ।
प्रतिवादीको तर्फबाट बहस गर्न ३४ जनाले वकालतनामा लेखाएको कारण सबैले बहस गर्दा करिब ३ दिन बहसमै सकिने भएकाले बुधबार बेलुका वा बिहीबार मात्रै थुनछेक आदेश आउने अनुमान गरिएको छ । राताेपाटीबाट
यी हुन् 'नेपाली हिटलर'
घटना आजको हैन, २०६४ चैत २७ को साँझको हो । घटना ८ जनाको हत्या आशंका । दुई जना नेपाली छ जना भारतीय नागरिक । घटनाको उद्देश्य चुनाव कब्जा गर्ने अनि तयारी बम बनाएर पड्काउने । मुख्य अभियुक्त रौतहटका बाहुबली सांसद महम्मद आफताब आलम । तर योजना पूरा हुनुअगाडि नै जहाँ बम बनाइराखेको हो, त्यहीँ बम पड्कियो । ३५ जनाले बम बनाइरहेका थिए । बम विष्फोटको कारण देखियो चुरोट ।
पहिलो संविधानसभा निर्वाचन कांग्रेसका लागि कठिनै थियो । सशस्त्र द्वन्द्व त्यागेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको माओवादीको दबदबा र प्रभाव बढी थियो ।
पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा आफ्नो क्षेत्रको बुथ कब्जा गर्ने योजनासहित नेपाली कांग्रेसबाट उम्मेदवार बनेका आलमले बम बनाउन नेपाली र भारतीयलाई ल्याएर राजापुरको फरदवा गाउँको टहरोमा बम बनाउन लगाएका थिए । एक्कासि बम पड्कियो । स्थानीयको सातो गयो । भागाभाग नै भयो । घटनास्थलमा कालो बादलको मुस्लो उड्यो ।
पूर्वमन्त्री शेख इद्रिसको घरनजिकै बिस्फोट भएको थियो । आलम इद्रिसका भतिजा थिए ।
बम पड्केर मान्छेहरु मरे भन्ने हल्ला गाउँभरि फैलियो । प्रहरी पनि आयो ।
निर्वाचनमा त्यसको केही प्रभाव परेन । न आलमलाई नै केही भयो । स्थानीयको सातो जाने घटना भोलिपल्ट सामसुम भइसकेको थियो । निर्वाचनको परिणाम उनकै पक्षमा आयो ।
तर निर्वाचनमा बुध कब्जा गर्न आलमले बम बनाउन लगाएको ठाउँमा बम पड्केर मान्छेहरु मरेको हल्ला कायमै थियो । जहाँ घटना भएको थियो, त्यहाँ उनको त्रास निकै थियो । केन्द्रमा कांग्रेसकै गृहमन्त्री थिए कृष्णप्रसाद सिटौला ।
घटना ठूलै भएको थियो तर सामसुम बनाइयो ।
प्रहरी नै सहयोगी
तत्कालीन सरुअठा गाविस–२, हाल यमुनामाई गाउँपालिका–४ निवासी श्रीनारायण सिंहका २२ वर्षीय छोरा पिन्टु सिंहलाई आलमका सहयोगीले निर्वाचनमा सघाउन भन्दै लगेका थिए । उनी घर फर्किएनन् । सरुअठाकै रुक्साना खातुनका छोरा ओसी अख्तर कहाँ गए, अत्तोपत्तो भएन ।
जसले आफ्ना सन्तानलाई निर्वाचनमा सघाउन भनेर लगेका थिए, उनीहरुसँग सोधखोज गरे तर केही पत्तो लागेन । रुक्सानाले छोरा पाइनन्, उनको कपडा मात्र पाइन् ।
घटनास्थलमा पुगेको प्रहरीले घटना जे भनिएको थियो, त्यो नभएको रिपोर्ट दियो तर गाउँमा घटनामा घाइते भएका र मारिएकाहरुलाई नजिकै रहेको इँट्टाभट्टाको भट्टामा लगेर जलाएको चर्चा कायमै थियो ।
आलमको घटनाबारे थाहा पाएका तत्कालीन एमाले र माओवादीका नेताले चासो राखे तर अगाडि बढाउन सकेनन् । घटनामा परेका अधिकांश भारतीय नागरिक थिए । उनीहरुका कोही आफन्त आएनन् खोज्न । दुई नेपाली परिवार आफ्ना सन्तान खोज्न प्रहरी कार्यालय पुगे तर जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटले जाहेरी नै लिएन ।
उजुरी पनि नलिएपछि २०६५ वैशाख १८ मा हुलाकमार्फत् जाहेरी दर्ता भयो । हुलाकबाट आएको जाहेरी दर्ता गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधानको आधारमा दर्ता पनि भयो । प्रहरीले पाँच जनालाई आरोपी बनाएर सोधपुछ पनि भयो तर प्रमाण नपुगेको भन्दै मुद्दा अगाडि बढेन ।
पीडित परिवार मान्ने पक्षमा थिएनन् । उनीहरुले असार ३० मा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा निवेदन दिए । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पनि प्रमाण नपुगेको भन्दै मुद्दा चलाउन नसक्ने जनायो । महान्यायधिवक्ताको कार्यालयले खोजेको प्रमाण मृतकको शव थियो, जो इँटाभट्टामा जलेर खरानी भइसकेको थियो ।
छोराको खोजीमा लागेकी रुक्साना खातुनकले हार मानिनन् । उनी महान्यायधिवक्ताको निर्णयलाई चुनौती दिन सर्वोच्च अदालत आइन् र रिट दिइन् ।
रिट हाल्नेको हत्या
शेख रुक्सना खातुन छोरालाई न्याय दिलाउन कम्मर कसेर लागेकी थिइन् । आलमका निकट उनको घरमा आएर फकाउँथे, धम्क्याउँथे तर उनी विचलित भइनन् ।
उनले जाहेरी दिएदेखि नै धम्की आउन थालिसकेको थियो । उनको घरमै आक्रमणसमेत भयो । तर्साउन गोली पनि चलाइयो, तर उनी डराइनन् । डराएर नहुने देखेपछि पैसा र जग्गाको प्रलोभन आयो तर उनी लोभिइनन् । २०६७ मा उनले सर्वोच्चमा रिट हालेपछि धमक्याउने क्रम झन् बढेको थियो ।
सर्वोच्चमा रिट हालेपछि उनी प्रायः एक्लै हिँड्न छाडेकी थिइन् । २०६७ मै तीन किलोमिटर टाढाको माइतीबाट सम्धिनीसँग घर फर्कंदै गर्दा उनीमाथि आक्रमण भयो र मारिइन् उनी ।
उनको रिटको आधारमा २०६९ जेठ १६ मा महान्यायाधिवक्ताको निर्णय खारेज गर्दै सर्वोच्चले अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई आदेश दियो । आदेश आउँदा उनको हत्या भइसकेको थियो ।
अदालतबाट आदेश आए पनि अनुसन्धान भने अगाडि बढेन, थाँति नै रह्यो । अदालतको आदेश कार्यान्वयन नगरेको भन्दै अदालतको मानहानिमा प्रक्रिया अगाडि बढ्ने भएपछि बल्ल प्रहरी तात्यो र रौतहट प्रहरीले आलमलाई पक्राउ गरी हत्या अभियोगमा हिरासतमा राखेर अनुसन्धान अगाडि बढायो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटका एसपी भूपेन्द्र खत्रीका अनुसार घटनामा ८ जनाको हत्या भएको भनिए पनि प्रहरीमा २ जनाको मात्र जाहेरी परेकाले आलमलाई दुई जनाको हत्या आरोपमा अनुसन्धान भइरहेको छ ।
के–के छ प्रमाण
१२ वर्षअघि भएको घटनाको बलियो प्रमाण अझै देखिएको छैन । पहिलो पटक मुद्दा चलाउने प्रक्रिया शव फेला नपरेको र इँटाभट्टामा जलाएकोबारे बलियो प्रमाण नभएको भन्दै मुद्दा चलाउन अस्वीकार गरिएको थियो ।
कुनै व्यक्तिको शव फेला नपरी वा हत्या गरी शव गायब बनाएको प्रमाण फेला नपरी मुद्दा अगाडि बढ्न कठिन हुन्छ । कानुनसम्बन्धी जानकारका अनुसार प्रमाण ऐनले कुनै व्यक्ति हराएको १२ वर्षपछि मृत्यु भएको मान्छ । अहिले प्रहरीले त्यसैलाई टेक्ने तयारी गरेको छ ।
स्रोतका अनुसार २०६५ जेठ १९ मा घटनास्थलबाट प्रहरीले माटो तथा मृतक ओसी अख्तरको लुगा र जुत्ता बरामद गरी परीक्षणका लागि पठाएको थियो । त्यो समेत यो घटनाको प्रमाण बन्न सक्छ ।
बम पड्किएको भनिएको स्थानको मुचुल्कामा समेत घटना भएको हो भन्ने आधार खुलाउने प्रमाणहरु रहेको अनुसन्धानमा संलग्न स्रोतले जानकारी दियो ।
घटनाका केही प्रत्यक्षदर्शी समेत प्रहरीले फेला पारेको छ । प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार बम बिस्फोटमा दुई जना मारिएका थिए । त्रिलोक र ओसी घाइते मात्र थिए । बम बिस्फोट भएकै साँझ प्रहरीका दुइटा गाडी आएर त्यसको बीचमा ट्र्याक्टर गुडाएर घाइते र मृतकलाई इँट्टाभट्टामा लगेर जलाइएको थियो ।
ट्र्याक्टरबाट बोराको पोको निकालेर भट्टामा हाल्दै गरेको देखेका प्रत्यक्षदर्शीहरुसमेत अझै रहेको स्रोतले बतायो ।
प्रहरी स्रोतका अनुसार त्यसदिन बम बनाउन संलग्न र बिष्फोटमा बाँचेका एक व्यक्तिको पहिचान भएको छ । उनी जीवितै रहेको जानकारीका आधारमा प्रहरीले खोजी शुरु गरेको छ ।
घटनामा बाँचेका भारतीय नागरिकको बयान, ट्याक्टर चालक लगायतको बयानबाट समेत घटनाबारे महŒवपूर्ण जानकारी आउने भएकाले प्रहरी त्यतासमेत केन्द्रित भएको देखियो ।
‘घटनामा संलग्न एक व्यक्ति जीवितै रहेको सूचना आएको छ,’ अनुसन्धान स्रोतले भन्यो, ‘हामी उनको खोजीमा छौं ।’
आलमसहित उनका भाइ महताब, शेख भदई, मोबिन आलम र शेख सराज समेत घटनामा संलग्न देखिएका छन् । आलमको पक्राउपछि उनीहरु फरार छन् । प्रहरी उनीहरुको खोजीमा छ ।
आलमको राजनीतिक यात्रा
आफताब आलम नेपाली कांग्रेसका पुराना नेता शेख इद्रिसका भाञ्जा हुन् । उनकै बलमा उनले राजनीतिक यात्रा शुरु गरेका थिए । आलमले २०५३ सालदेखि लगातार चुनाव जित्दै आएका छन् । २०७० मा आफ्नै भाञ्जा मुस्ताक आलम तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) बाट उम्मेदवार बन्दा उनी पराजित भएका थिए । त्यसयता उनी निरन्तर सांसद हुँदै मन्त्रीसमेत बने । २०७४ मा चुनाव जितेका उनी पक्राउ पर्दा समेत माननीय नै हुन् । पक्राउपछि उनको पद निलम्बन भएको छ । शुक्रबार
‘नेपाली हिटलर’ आलमका छोरानै प्रहरी 'इन्सपेक्टर'
अफ्ताबकै आदेशमा भाइ डा. अख्तरले घाइतेलाई दिएका थिए बेहोस हुने इन्जेक्सन
सबैले आलमलाई जोगाए’ : प्रहरी
आलमको न्यायाधीशलाई जवाफ : मोबाइल नम्बर बिर्सें’
आलमको आजदेखि थुनछेक बहस, जन्मकैदको माग गर्दै ८ सय पेजकाे राय पेस
अदालतमा आलम : पीडितको पक्षबाट १२ र आलमको पक्षबाट २८ वकिलले बहस गर्ने
आलमलाई ३२ वर्ष कैद सजाय माग
प्रहरीकै खुलासा : एसपी र आलमको सल्लाहमा घाइतेलाई भट्टामा हालिएको थियो
रौतहट राजपुर नरसंहारकाण्ड : आलमसहित १० जनालाई जन्मकैद
सांसद मोहम्मद अफताव आलमलाई जन्मकैद
Police send victims’ clothes, kiln ash for lab test in Alam case
बाख्रा चोर आलम कसरी बने ज्यानमारा ?
‘ज्युँदै मान्छे झुन्ड्याउन लगाएका थिए आलमले’
आलम प्रकरणः विस्फोटपछि शव ओसार्ने ट्रयाक्टर भेटियो
आलम पक्राउ प्रकरण : पहिले नै गरिएको थियो सर्वस्वसहित जन्मकैद मागदाबी
आलमको डरमा पीडित परिवारः भन्छन्, दोषी उम्के भने हामी बाँच्न पाउँदैनौं
इँटाभट्टा नाइके रौतहट जिल्ला अदालतमा : २३ वकिल पक्षमा, तर पनि आलम थुनामा
आलमलाई थप ५ दिन थुनामा
यसरी पक्राउ गरेकाे थियो सांसद आलमलाई, सनसनीपूर्ण खुलासा
नेपाली कांग्रेसका सांसद आलमलाई ७ दिन म्याद थप
सांसद आलम पक्राउको विरोधमा सडकमा टायर बाले
कांग्रेस सांसद आलम रौतहटबाट पक्राउ
वडा अध्यक्ष शाही पक्राउ, ३ वर्षदेखि १६ वर्षीया किशोरीलाई बलात्कार गर्दै आएको खुलासा
टिप्पर प्रहरी नियन्त्रणमा
सशस्त्र प्रहरीमा टिकटक काण्ड, १६ माथि कारवाही (लिष्टसहित)
यी वकिलले बलात्कृत महिलालाई न्याय दिलाउन २ करोडको जागिर छोड्ने
अनलाइनमा पढ्ने विद्यार्थीलाई घर पठाउने योजना रद्द
विवाहको आश्वासन दिएर बालिका बलात्कार गर्ने २ युवा जेलमा
आफ्नै भूमिमा आवतजावत गर्न भारतीय अवरोध